merolagani - हरेक एक सय वर्षमा किन हुन्छ महामारीको आक्रमण ?
हरेक एक सय वर्षमा किन हुन्छ महामारीको आक्रमण ?
Apr 09, 2020 12:11 PM Merolagani
कयौँ देशमा पटक–पटक महामारीको आक्रमण हुने गर्दछ । जसले पूरै विश्वलाई नै प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । हालसम्म महामारीका कारण हजारौँ मानिसहरुको ज्यान गइसकेको छ ।
हरेक शताब्दीमा आउने महामारीको कहानी के हो? किन हरेक एकसय वर्षमा नै मानवीय सभ्यतामाथि हमला हुन्छ? किन सबै कुरन भएर पनि मानिसहरु यस महामारीका सामुन्ने बेबस हुन पुग्छ? कसैले पनि हालसम्म यो कुराको बारेमा बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।
बिगत ४ शताब्दीमा हरेक एकसय वर्षमा अलग–अलग महामारीले विश्वभर हमला गरेको छ र यसैका कारण हरेक पटक लाखौँ मानिसरुको मृत्यु भएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा